Umphumela Wamakhamera Worn Womzimba kuma-Security Guards | Izixazululo ze-OMG
Umphumela Wamakhamera Worn Worn on Guards Security
Ngosuku ngalunye oludlulayo, inani labantu baleli zwe liyanda. Lokhu kunikeza nokukhuphuka okukhulu kobuchwepheshe nesayensi. Manje ngosuku, singabona izinto eziningi ezisezingeni eliphansi eduze kwethu. Lokhu kusungulwa kwenza izimpilo zethu zibe lula. Njengoba sanda isibalo sedolobha elikhulu, nakanjani kuzoba nokwanda okukhulu kwezinga lobugebengu. Amaphoyisa amadolobha kufanele abhekane nezinkinga nsuku zonke. Ngokukhululeka kwabo, isayensi isisizile ngokusinika Amakhamera we-Body Worn.
Iyini Ikhamera Egcotshwa Umzimba?
Amakhamera Worn Worn anjengoba igama libonisa, amakhamera agqokwa emzimbeni womuntu. Ngenxa yalokhu, ikhamera iqopha impilo yansuku zonke yalowo muntu. Kufana nokuba neso elengeziwe. Ikhamera ifakwe ebhokisini lensimbi elinebhethri kulo. Ibhethri liyakhokhiswa. Leli bhokisi linamathiselwe ohlangothini olungaphambili lomzimba womuntu. Ngakho-ke, inqubo yansuku zonke yalowo muntu iqoshwa kwikhamera. Ukuqoshwa okwenziwe yikhamera kugcinwa kwimemori khadi enamathiselwe ebhokisini ukuze ukuqoshwa kubonwe nganoma yisiphi isikhathi.
Imiphumela yamakhamera we-Worn Worn kumaPhoyisa
Ama-body Worn Camera anikeza usizo olukhulu empilweni yamaphoyisa yansuku zonke. Uma sibona ngokucacile, khona-ke singabona izinzuzo eziningi kulo mkhiqizo. Ama-body Worn Camera anikeza usizo olukhulu empilweni yamaphoyisa yansuku zonke. Iziphatha njengeso lesithathu ngendlela ngokwandisa umuzwa wokubonwa komuntu. Kungashiwo ngoba kwesinye isikhathi umuntu akaboni imininingwane emincane emzungezile ngamehlo akhe. Kepha ngekhamera, uyakwazi ukukubona kaninginingi ukwenza kube lula ngaye ukubonisa imininingwane encane. Ngakho-ke, singasho ukuthi kudala imiphumela emihle emaphoyiseni.
Ingabe Abalindi bezokuphepha Bangawasebenzisa Amakhamera Worn Worn?
Amakhamera agqokwa ngomzimba angasetshenziselwa izinhloso eziningi. Njengoba sixoxe ngaphambili, inezinzuzo eziningi. Ilola umqondo wokubuka ngokunikeza iso elengeziwe ngendlela. Ividiyo eqoshiwe ingenza onogada ngezindlela eziningi kepha uma sikhuluma ngokubanzi, lapho-ke siyabona ukuthi ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba onogada akufani nokwamaphoyisa.
Kodwa-ke, awukho umthetho othize owenqabela onogada ekusebenziseni amakhamera agqoke umzimba. Izinkampani zingahlomisa onogada bazo ngamakhamera agqokwa ngomzimba. Kepha kuzoba nezinkinga ezithile uma kunogada.
Yini ehlukile uma kunonogada?
Njengoba sikwazi ukubona ukuthi onogada banezinhloso ezihlukile ngokuqhathaniswa namaphoyisa. Azidingi ukuya kwezinye izindawo. Futhi, abayi ndawo lapho beyophenywa khona. Ngakho-ke, amakhamera agqokwa ngomzimba alungele kakhulu ukusetshenziswa kwamaphoyisa esikhundleni soonogada. Kodwa-ke, uma unogada kwenzeka ukuthi ahlangane nabenzi noma udlame abathile, khona-ke amakhamera agqokwa ngomzimba azohlinzeka ngokuphuma okuhle ngokuqopha ubuso bawo. Kepha umkhuba wokuhlomisa unogada ngekhamera egqoke umzimba awubonakali ezinkampanini eziningi.
Kungani izinkampani eziningi zingasebenzisi amakhamera agqoke imizimba kunogada bazo:
Asizibonanga izinkampani eziningi zihlomisa onogada bazo ngamakhamera agqokwa ngomzimba. Kunezizathu ezithile eziyisisekelo zalokho. Ake sibheke:
Inkinga enkulu ngenxa yokuthi izinkampani eziningi azikwazi ukuhlomisa onogada bazo ngomzimba ogqoke amakhamera yintengo ephezulu yalawa makhamera. Ngobuchwepheshe obusafufusa, izindleko zokuhlomisa onogada ngamakhamera omzimba sezithengeka kakhulu kepha akubalulekile. Iqoqo elilodwa lekhamera eligugile lomzimba lingabiza kakhulu emakethe. Kubiza cishe u- $ 700- $ 800. Kungani kunesidingo sokuthi izinkampani zithengele onogada bazo amakhamera abizayo? Umnyango wamaphoyisa nawo ubhekene nenkinga efanayo.
Umnyango wamaphoyisa wezwe mkhulu kakhulu odinga inani elikhulu lamakhamera ezisebenzini. Silinganisela ukuthi ikhamera ngayinye yesikhulu ibiza cishe i- $ 800 okuwumthwalo womnyango. Ngakho-ke, kuyindlela enkulu yokusebenzisa amakhamera agqoke umzimba.
Okunye okungavumeli izinkampani ukuthi zithenge amakhamera agqokwa ngomzimba kubaqaphi bazo bezokuphepha yisidingo. Njengoba sesixoxile phambilini, asikho isidingo esithile samakhamera agqokwa ngomzimba emahoreni okuqashwa. Yize kuba nomthelela ukusebenza konogada kodwa hhayi kangako njengoba kuthinta amapholisa. Ngakho-ke, izinkampani azizwa isidingo sokuthenga amakhamera agqokwa ngomzimba kubaqaphi bawo.
Kuyacaca ukuthi ukuvela kobuchwepheshe obusha nezinkundla zokuxhumana sekushintshe indlela abantu ababheka ngayo ubumfihlo babo, kepha ukuqoshwa okwenziwe ngamakhamera agqokwa ngomzimba kungahle kuvume ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokuqashelwa kobuso.
Ukusetshenziswa kwamakhamera we-Body Worn Camera kunika onogada ithuba lokuqopha izimo ezibucayi, kepha futhi nokuqopha ubuso babantu abadlula lokho kungaba kubi ngemfihlo yabo. Mayelana nalokho, ezinye izinhlaka zokuqinisa umthetho zithathe izinyathelo futhi zakumemezela okuphikisana nobumfihlo babantu. Lokhu, ngenxa yalokho, ayiyinhle inkampani.
Akwanele ukumane unikeze isikhulu ikhamera yomzimba bese utshela isikhulu ukuba siphume siyisebenzise. Izinqubomgomo ngokusetshenziswa kwamakhamera (lapho ikhamera kufanele ivulwe noma ivaliwe, ukwazisa abantu ukuthi ziyaqoshwa, kanjani ukufaka idatha, njll.) Kufanele zisungulwe futhi izikhulu kufanele ziqeqeshelwe inqubomgomo.
Amakhamera agqokwa ngomzimba angasetshenziselwa ukuqapha ukusebenza konogada. Kwenza umphathi agadwe kahle. Ngokwazi ukuthi yonke into iyaqoshwa, ngeke axhakanye nabanye. Ngasikhathi sinye, umuntu okhuluma nonogada naye uzozama ukuphathwa kahle nokuqondiswa okufanele njengoba erekhodwa. Ngakho-ke, izinkampani zingawasebenzisa la makhamera ukuqapha onogada bazo.
Umphumela Wamakhamera Worn Worn on Guards Security igcine ukuguqulwa: Septhemba 26th, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3367 Ukubuka kwe-3 Namuhla
↳ Ikhamera Yomzimba Wamaphoyisa / Ikhamera Egqoke Umzimba eSingapore